Timoteo Nhoma a Ɛto So Abien 1:1-18
Timoteo gyidi nti, Paul daa Onyankopɔn ase (3-5)
Onyankopɔn akyɛde no, hyɛ mu gya (6-11)
Kɔ so kura nsɛmpa no mu (12-14)
Paul atamfo ne ne nnamfo (15-18)
1 Me Paul a menam Onyankopɔn pɛ so yɛ Kristo Yesu somafo sɛnea nkwa a ɛnam Kristo Yesu so ho bɔhyɛ+ te no, 2 mede krataa yi rekɔma me dɔba Timoteo:+ Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu adom ne mmɔborɔhunu ne asomdwoe nka wo. 3 Meda Onyankopɔn ase. Ɔno na meresom no, sɛnea m’agyanom som no no. Na mede ahonim* pa na ɛresom no. Daa mekae wo wɔ me nkotosrɛ mu awia ne anadwo. 4 Mekae wo nisu no a, na m’ani agyina sɛ mehu wo, sɛnea ɛbɛyɛ a anigye bɛhyɛ me ma. 5 Na mekae wo gyidi a nyaatwom nnim+ a edii kan tenaa wo nana Lois ne wo maame Eunike mu no. Mewɔ ahotoso sɛ saa gyidi no da so wɔ wo mu. 6 Eyi nti, merekae wo sɛ Onyankopɔn akyɛde a mede me nsa guu wo so ma wunyae no, hyɛ mu gya.+ 7 Efisɛ Onyankopɔn amma yɛn ehu honhom,+ na mmom ɔmaa yɛn tumi+ ne ɔdɔ ne adwene a emu da hɔ honhom. 8 Enti mma w’ani nnwu yɛn Awurade ho adansedi+ no ho, na me a Awurade nti meyɛ ɔdeduani no nso, mma w’ani nnwu me ho. Mmom, fa wo ho to Onyankopɔn tumi so,+ na nsuro sɛ asɛmpa no nti wubehu amane.+ 9 Wagye yɛn, na wafrɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ akronkronfo,*+ ɛnyɛ yɛn nnwuma nti, na mmom n’ankasa atirimpɔw ne n’adom+ ntia. Wɔde saa adom yi maa yɛn wɔ Kristo Yesu mu fi teteete, 10 na afei de wɔnam yɛn Agyenkwa Kristo Yesu ahoyi so ada no adi pefee.+ Ɔno na ɔnam asɛmpa no+ so ayi owu afi hɔ,+ na ɔnam asɛmpa no ara so ama yɛahu sɛnea yebenya nkwa+ ne nea ɛmporɔw+ no. 11 Saa asɛmpa no nti na woyii me sɛ ɔsɛnkafo ne ɔsomafo ne ɔkyerɛkyerɛfo no.+ 12 Eyi nso nti na merehu amane yi,+ nanso ɛnyɛ me aniwu.+ Efisɛ minim Onii a magye no adi no, na mewɔ ahotoso sɛ nea mede ahyɛ ne nsa no, obetumi ahwɛ so akosi sɛ saa da no bɛba.+ 13 Nsɛmpa* ho nhwɛso*+ a wote fii me nkyɛn no, kɔ so fa gyidi ne ɔdɔ a Kristo Yesu ayɔnkofa ama woanya no kura mu. 14 Adepa a wɔde ahyɛ wo nsa yi, fa honhom kronkron a ɛte yɛn mu+ no hwɛ so yiye. 15 Wunim sɛ nnipa a ɛwɔ Asia+ no nyinaa atwe wɔn ho afi me ho; Figelo ne Hermogene ka saa nkurɔfo no ho. 16 Awurade nyi mmɔborɔhunu adi nkyerɛ Onesiforo fifo,+ efisɛ ɔmaa me ho dwoo me mpɛn pii, na nkɔnsɔnkɔnsɔn a wɔde agu me no amma wamfɛre. 17 Mmom bere a ɔbaa Roma no, ɔhwehwɛɛ me denneennen, na ohuu me. 18 Awurade mma onnya Yehowa* hɔ mmɔborɔhunu saa da* no. Na wo ara wunim nea ɔyɛ maa me* wɔ Efeso no nyinaa.
^ Anaa “ɔde ɔfrɛ kronkron afrɛ yɛn.”
^ Anaa “Nsɛm a mfaso wɔ so.”
^ Anaa “nhwɛsode.”
^ Anaa “atemmu da.”
^ Anaa “ɔsom a ɔsomee.”